Madaxweynaha oo kulamo la qaatey qeybaha bulshada ee magaalada Baydhab * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweynaha oo kulamo la qaatey qeybaha bulshada ee magaalada Baydhab
By A warsame	 On Oct 4, 2016
(Villa Somalia)—-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo booqasho shaqo ku jooga magaalada Baydhabo ee xarunta KMG ee Dowlad Goboleedka Koonfuur Galbeed Soomaaliya ayaa weli ku guda jira kulamadii u la yeelanayey qeybaha kala duwan ee bulshada degaannadaasi.
A warsame	 2 weeks ago 0
Madaxweynaha oo ujeedka socdaalkiisa uu yahay dardar-gelinta hawlaha doorashada, xaqiijinta qoondada dumarka ee labada aqal iyo in shacabku uu taageero hannaanka dowladnimo, ayaa kulamadii ugu dambeeyay waxaa uu la qaatey madaxda jaamacadaha, aqoonyannada, ardayda jaamacadaha, Ciidanka Qalabka Sida, ururrada haweenka, dhalinyarada, siyaasiyiinta, odayaasha dhaqanka, madaxda maamulka Koonfuur Galbeed iyo culumada diinta.
Madaxweynaha ayaa qeybahaasi u la kulmay uga warbixiyey hannaanka dhismaha Soomaaliyada cusub oo ku saleysan dimoqraadiyad iyo horumar dalku uu ku tallaabsado.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa uu qeybahani kala duwan ee bulshada ee uu la kulmay ugu baaqey inay gacan weyn ka geystaan dib u heshiisiinta iyo nabadeynta oo sal u ah dhismaha qaran Soomaaliyeed oo isku tashan kara.
Waxaa sidoo kale uu Madaxweynaha kulan gaar ah la yeeshay Guddiga Doorashada Dowlada Goboleedka Koonfuur Galbeed oo uu ku ammaanay waxqabadkooda, dhanka kalena ka codsadey inay daah-furnaan ku shaqeeyaan.
Taliska Xoogga Dalka oo ka war bixiyay Qarax ismiidaamin ah…
Lacag la siin jiray ciidamada Kenya ee ka howlgala…
Xukuumadda oo si toos ah u eedeysay Qoor Qoor oo daahiyay…
Ciidamada Puntland oo Al shabaab kala wareegay saldhig…
Madaxweynaha Hirshabelle oo kulan la qaatay safiirka UK iyo…
Macalinkii xulka qaranka Soomaaliya oo shaqada laga ceyriyey…
Golaha wadatashiga qaranka oo la filayo in ay tagaan…
Soomaaliya oo dacwad ka dhan ah Kenya u gudbisay golaha…
Dhalinyaro dooneysay iney ku biiraan Militeriga Soomaaliya…
Kenya oo dib u fureysa safaaraddeeda Muqdisho
Banaabax looga soo horjeedo duqeymaha Kenya oo ka dhacay…
XFS oo gargaarkii ugu horeysay u geysay dadka uu saameeyey…
Puntland: 18 ruux oo xukun toogasho ah lagu riday